नायिका सुष्माको मेकअप स’प्रेको कि बि’ग्रेको ? – eSidhakura
बाइडेनको आ’देशमा पहिलो ह’वाई ह’मला, ठुलो मा’नविय क्ष’ति भएको आ’शंका
प्रधानमन्त्रीलाई एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्ली लैजाँदा
नायिका स्वस्तिमा खड्का साउथ चलचित्र ‘थिरिमाली’मा अनुबन्धित, कति लिइन पैसा ?
सहायक प्रअ घिमिरे घरको आँगनमा मृ’त भेटिए
प्रचण्डले २ छोरीको बिहे लखनउको लीला होटलमा एकैचोटी गरिदिएका थिए…
‘विप्लव’को हस्ताक्षर सहित आयो यस्तो बिज्ञप्ति
सरकार र ‘विप्लव’ समूहबिच आजै बेलुकादेखि वार्ता हुने, प्रकाण्ड काठमान्डौ छिरे
जापानमा एक नेपाली युवाको मृ’त्यु
‘विप्लव’ समूहको बार्ता टोलीमा प्रकाण्ड सहित अरु कोको छन् ?
भारतको एक र’हस्यमय ताल, जहाँ सयौँ मानिसको अ’स्थिपञ्जर छरपस्ट छ
आफ्नै प्रधानमन्त्रीको सु’रक्षा गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीले जनताको सु’रक्षा चैं कसरी गर्नुहोला कुन्नि ?
केपी ओलीलाई ह’टाउने ता’गत हामीसँग छैन: राजेन्द्र महताे
मुख्य पृष्ठसमाजनायिका सुष्माको मेकअप स’प्रेको कि बि’ग्रेको ?
नायिका सुष्माको मेकअप स’प्रेको कि बि’ग्रेको ?
काठमाडौं: महिला र पुरुषको सुन्दरतामा मेक अपको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सुन्दरता निखार्न मेकअप गरिन्छ। मेकअप गर्ने तरिका मिलेन भने सुन्दरता नि’खारिनुको साटो कुरूप हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । मेकअप आफैंमा एउटा कला हो । मेकअपको सही प्रयोगले साधारण व्यक्ति पनि विशेष देखिन्छन् । रंगिन दुनियाँमा त झन् मेकअप विनाका कलाकार भेट्न असम्भव नै हुन्छ ।फिल्मको सुटिङ सेटमा कलाकारहरु क्यामेरा अगाडि कम, मेक अपम्यानको अगाडि बढि देखिन्छन् । एक स’ट सकिन साथ मे’कअपम्यानले उनीहरुलाई सिं’गार्न थालिहाल्छन।
अन्य समयमा पनि कला कारहरुले मेकअपको प्रयोग दिनहुँ गरेका हुन्छन । यो मामलामा नायक भन्दा नायिकाहरु अगाडि छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा महंगा पा’र्लरमा सिंगारेर मात्र उनीहरु पुग्ने गर्दछन् ।तर, सुन्दर देखिन प्रयोग गरिने मेकअप बि’ग्रियो भने कस्तो देखिएला ? यसका लागि अभिनेत्री सुष्मा कार्कीलाई हेर्दा पुग्छ। आइतवार दरवारमार्गको ल’ण्डन प’ब क्याफेमा उनले आफ्नो ब’र्थडे पार्टी राखेकी थिइन्। यो क्याफे त्यही हो, जहाँ केही दिनअघि उनी माथि एक समुहले हा’तपात गरेको थियो । बर्थडे पार्टीमा मिडियाकर्मीदेखि सुष्माका नजिकका व्यक्तिहरु उपस्थित थिए ।
आफ्नो बर्थडे पार्टी, विशेष हुने नै भयो । सुष्मा विशेष भएर न’पुग्ने त कुरै आएन । पार्टी सुरु हुनुभन्दा अ’गावै पा’र्लरमा सिं’गारेर उनी आफ्नो जन्मदिन मनाउन पुगेकी थिइन् । तर, उनले यति हे’भी मे’क अप गरेकी थिइन् कि पार्टीमा उनलाई ठ’म्याउन धेरैले आँखा नै मि’च्नु परेको थियो । उनले सामाजिक सञ्जालमा पो’स्ट गरेका तस्विरमा पनि उनलाई चिन्न फोटो ‘जु’म’ नगरेसम्म गाह्रो पर्छ ।
प्रहरी नि’रीक्षक उ’द्धव पोखरेल ज’सले मि’सिलमा मृ’त’कको ग’लत फो’टो रा’खेका थि’ए
प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा परिषद् बैठक डाकियो, लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
अ’भियुक्तद्वारा भा’गर’थीको ब’ला’त्का’र अ’स्वीकार : प्रहरी